” ငါ့ ကြောင့် ငါ အခါခါသေရ၏ “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Poetry » ” ငါ့ ကြောင့် ငါ အခါခါသေရ၏ “	4
” ငါ့ ကြောင့် ငါ အခါခါသေရ၏ “
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Nov 25, 2016 in Poetry |4comments
“ငါ့ ကြောင့် ငါ အခါ ခါ သေ ရ ၏”
aye.kk says: မှန်လိုက်တာ။
Thint Aye Yeik says: ဘာကြောင့်ပဲ သည်းခံရ သည်းခံရ
သည်းခံခြင်းက အောင်မြင်ခြင်းတစ်ခု လို့ ကြားဖူးတာပဲ။
ကိုယ်တိုင်ကတော့. . .
အခက်အခဲ အကျပ်အတည်းတွေနဲ့ ကြုံရင် သည်းခံဖို့ထက် ရင်ဆိုင်ရမလား ရှောင်ထွက်ရမလားဆိုပြီး
တွေဝေတတ်သေး. . .
kai says: ဂေါတမဗုဒ္ဓကတော့.. အောင်ခြင်းရှစ်ပါးထဲ..လိုအပ်တဲ့အတိုင်းအတာနဲ့.. ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်သွားတာပဲ..။
သည်းခံလိုက်တာ.. မရှိ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11634
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မအောင်ခင် အကြိမ်ပေါင်းများစွာရှုံးခဲ့တယ်လေ